Mario Benedetti ၏အကောင်းဆုံးစာပိုဒ်တိုများ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Mario Benedetti ၏အကောင်းဆုံးစကားစု
ဟိုဆေးမှ Miguel | | စာပိုဒ်တိုများ
Mario Benedetti သည်ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာနှင့်ပြဇာတ်ရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းသိသင့်သည့်အပြင်လုပ်ငန်းစဉ်၌သင့်အားကူညီရန်နှင့်သူ၏အလုပ်တွင်အပြုသဘောဆောင်ရန်သင့်အားအားပေးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းထားပါသည်။ Mario Benedetti ၏အကောင်းဆုံးစာပိုဒ်တိုများမျိုးဆက်သစ် ၄၅ မျိုးဆက်နှင့်သက်ဆိုင်သောဤလူကိုအနည်းငယ်ပိုကောင်းရန်သင်အားအထောက်အကူပြုမည့်စိတ်ကူးစုဆောင်းမှုတစ်ခု။
သင်၏စာကြည့်တိုက်တွင်ပါ ၀ င်သင့်သည့်စာရေးဆရာ Mario Benedetti
မင်းတို့အများစုဟာ Mario Benedetti ကိုသိလိမ့်မယ်လို့ငါတို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့နောက်လိုက်တွေထဲမှာလေ့ကျင့်နေဆဲလူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒီစိတ်ကူးနဲ့ဘာမှမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥရုဂွေးအရေးအသားနှင့်၎င်းသည်ဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့်သူ၏အလုပ်အတွင်းထူးခြားသောစကားစုများစွာဖြင့်မင်းကိုသင်၏သမိုင်းတွင်အရေးအကြီးဆုံးစာရေးဆရာများစုဆောင်းခြင်းတွင်သူရှိခြင်း၏အရေးပါမှုကိုမြင်ရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့်အနေဖြင့်သူ၏ဘ ၀ အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပိုမိုသိကျွမ်းရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းစာအုပ်၏အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုစာအုပ်ပေါင်း ၈၀ ကျော်ဖြင့်ဘာသာပြန်ဆိုထားသည့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတော်များများကိုသူ၏အလုပ်တွင်ကိုယ်စားပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားများသည် ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင်ဥရုဂွေးရှိ Paso de los Toros တွင်မွေးဖွားခဲ့သူဤကမ္ဘာ၏ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုကိုထင်ရှားစေသည်။
သူသေဆုံးသည်မှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မေလ ၁၇ ရက်၊ Montevideo ၌အသက် ၈၈ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ Morsoli Prize ဆုရရှိခဲ့သည့်ထူးခြားသောအမှုတော်နှစ်ခုမှာဥရုဂွေးနိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုကိုဆုချီးမြှင့်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြုသဘောဆောင်သောပံ့ပိုးမှုများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မှာ La trugua နှင့် Gracias por el fuego တို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤသူအကြောင်းသင်ဖတ်လိုလျှင်၎င်းသည်နောင်တမရသောကြောင့်ဤအလုပ်များနှင့်စတင်ပါ။
သတိပြုသင့်သည်မှာငွေရေးကြေးရေးပြproblemsနာများကြောင့် Mario Benedetti သည် Liceo Miranda တွင်ပညာသင်ကြားခြင်းကိုမပြီးနိုင်သဖြင့်သူအလုပ်လုပ်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်ဆက်လက်လေ့လာသင့်သည်။
Mario Benedetti ၏အထင်ရှားဆုံးသောစကားစုများကိုလေ့လာပါ
ဒီမှာအချို့ Mario Benedetti မှလူကြိုက်အများဆုံးစာပိုဒ်တိုများ.
နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်“ ပတ်ပတ်လည်လည်ပတ်ခြင်း” သည်မကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ဆုများရှိသည်။ သို့သော်၎င်း၏အောင်မြင်မှုကိုကျွန်ုပ် မကျေနပ်၍ သူ၏နိုင်ငံရေးရာထူးကိုညံ့ဖျင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။
"ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေတာဟာရှက်တတ်တဲ့လူသတ်သမားများ" ။ ဒီစကားစုကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ပြီးအမြဲတမ်းနှစ်သက်လိမ့်မည်
ဒီမှာလူသုံးမျိုးရှိတယ်။ အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသူ၊ အလုပ်လုပ်သင့်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသူတွေရှိတယ်။
Artigas သည်အမေရိကရှိတိုးတက်မှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးမာ့ခ်မမွေးဖွားမှီသုံးနှစ်ကသူသည်ပထမဆုံးစိုက်ပျိုးရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုရေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီသည်မိမိ၏ကမ်းခြေ၌ရှိကြသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုမုန်းခြင်း၊
ငါးမိနစ်ခန့်သည်ဘ ၀ တစ်သက်တာလုံးအတွက်လုံလောက်သောအချိန်ဖြစ်သည်။
ဘ ၀ ဆိုတာဘာနှစ်ခုမှကွင်းတစ်ခုလို့ယုံကြည်တယ်။ ကျွန်တော်ဘုရားမဲ့ဝါဒီပါ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သိသည်မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတာဝန်ယူရသည်။
လူသစ်သည်အန္တရာယ်နှစ်ခုမှသတိပြုရမည်။ လက်ျာလက်ျာဘက်၌၎င်း၊ ကျန်သူသည်လက်ဝဲဘက်၌၎င်း၊
ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတုတ်ကျင်းအဖြစ်ခုခံကာကွယ်ပါ၊ အရှုပ်တော်ပုံနှင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များမှ၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုများမှ၊ ယာယီနှင့်အမြဲတမ်းပျက်ကွက်မှုများမှကာကွယ်ပါ။
ပျော်ရွှင်မှုပြီးနောက်အထီးကျန်မှု၊ ပြည့်ဝပြီးနောက်အထီးကျန်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြီးနောက်အထီးကျန်မှုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်ပုံပျက်သောပုံသဏ္isာန်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်းအမှန်တရားမှာ၊ ထိုအချိန်တွင်လူတစ်ယောက်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ယောက်တည်းရှိသည်၊ လက်ကိုင်၊ ဆင်ခြေမပါဘဲ၊ ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ စည်းလုံးသောသို့မဟုတ်သီးခြားသောအရာတို့ကိုမပါဘဲ။ တစ် ဦး တည်းနေခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမသနားပါ။
နာဇီဝါဒဟာဂျာမန်ကျောင်းမှာစတက်တုန်းကပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးအကျိုးဆက်အနေနဲ့ကျွန်မတို့ဟာခွဲခြားဆက်ဆံမှုအောက်မှာနေခဲ့ရတယ်။ ဂျာမန်မိသားစုမှလူများကိုအတန်းအစား A ၌အပ်ထားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လည်းအတန်း B တွင်တာဝန်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ချမှတ်ထားသည့်အစီအစဉ်သည်အကြွင်းမဲ့လွတ်လပ်မှုဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံပြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်ပါ၊ အဘယ်သူမျှမအတားအဆီးရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအပေးအယူရှိပါတယ်။
သူမသည်ဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး သူမကိုသူမပြောတာကိုကြိုက်ပေမယ့်သူကတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ သူ့လက်များနှင့်သူ့မျက်လုံးများသာစကားပြောနိုင်ခဲ့သည်။
ဥရုဂွေးနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာဝေးလံတဲ့သေဆုံးမှုတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားနဲ့သိုးမွေးကိုမှီခိုနေရတဲ့လူတွေအပေါ်မှီခိုခဲ့တယ်။ ဤအရာအားလုံးသည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့်အရာရာပြီးဆုံးသွားပြီဟူသောဟန်ဆောင်ခံယူချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အကောင်းဆုံးအရာက caress ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏လက်နှင့်ငါ့လက်များအကြားတွင်တိတ်ဆိတ်စွာလေးလက်မ၊ သင်၏နှုတ်နှင့်ငါ့နှုတ်ခမ်းများအကြားမပြောသောစကားလုံးများ၏နယ်နိမိတ်ရှိသည်။ ပြီးတော့မင်းမျက်လုံးတွေနဲ့ငါ့မျက်လုံးတွေကြားမှာဒီလောက်ဝမ်းနည်းနေတဲ့အရာ။
ငါရုံး၏ကဗျာများနှင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်မှာအလွန်ကံကောင်းကြောင်းလူအများကပြောကြသည်။ ၎င်းသည်အthe္ဌမဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခြားခုနစ်ခုအကြောင်းကိုမည်သူမျှမကြားခဲ့ကြပါ။
တစ်ခါတစ်ရံကလေးဘဝသည်ပျောက်ဆုံးသွားသည့်ပရဒိသုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အခြားအချိန်များက shitty ငရဲ။
အထီးကျန်မှုဆိုတာဘယ်တော့မှအထီးကျန်မလာဘူး။ ငါတို့အထီးကျန်ခြင်းရဲ့ညှိုးနွမ်းပျက်စီးနေတဲ့ပခုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်မဖြစ်နိုင်တာကြာပြီ၊ ကျစ်လစ်တယ်။ တတိယသို့မဟုတ်စတုတ္ထရိုးရှင်းသောလေးစားမှု; ကောင်းသောလူဖြစ်ခြင်း၏အပုံပျက်။
ရုံးကဘဝကဘာသာရပ်များစွာကိုပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်မပြောရင်ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီဘဝနဲ့ငြီးငွေ့လာပြီးသတင်းစာပညာကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့်ကိုနယ်ချဲ့ဝါဒဆန့်ကျင်ရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားခဲ့တာပါ။ လူမည်းများ၊ Puerto Ricans နှင့် Czech များနှင့် ပတ်သက်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း။ ဒါဟာငါ့ကိုအများကြီးလှုံ့ဆျောသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်အမှန်တကယ်လိုချင်သည်မှာသင့်အတွက်ပြုလုပ်ထားသောအရာ; ထို့နောက်သင်ကယူ, ဒါမှမဟုတ်ကြိုးစားပါ။ ထိုဘ ၀ ၌သင်သွားနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် ပို၍ ကောင်းသောဘဝဖြစ်သည်။
မုန်းသည်ကသူတို့ကိုအုပ်ချုပ်သူသာလျှင်လှုံ့ဆော်သည်။ သူတို့ကြီးစိုးလာသောအခါသူတို့ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် misalign ။
ထိုအချိန်ကကဗျာဆရာများသည်ပန်းများ၊ ဂါဇယ်များနှင့်ပင်တိရိစ္ဆာန်များအကြောင်းကိုပင်ရေးသားခဲ့သည်။ ကဗျာဆရာတွေကဘာမှမရောင်းခဲ့ကြဘူး၊
လေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လည်းမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်လေကိုလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာအရာဝတ္ထုတွေကိုဖျက်ပစ်ပုံရတယ်။ ငါဆိုလို: ငါဖျက်ချင်သောအရာ။
ကျွန်တော့်အမေနဲ့အမေကသူတို့ကဘယ်တော့မှမကွာရှင်းခဲ့ကြဘူး၊ ကလေးတစ် ဦး အတွက်အမြဲတမ်းစိတ်ထိခိုက်စရာတခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏စာအရေးအသားသည်၎င်းနှင့်များစွာပတ်သက်သည်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်သို့ပထမ ဦး ဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်သည်ဤတိုင်းပြည်တွင်ရှိခဲ့သည့်မြောက်အမေရိကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုနားလည်စေခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည် - La Pell de Brau
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝမ်းနည်း။ မွေးဖွားပြီးကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းနည်းစွာသေဆုံးသည်။ သို့သော်ထိုအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဝမ်းနည်းဖွယ်အလှတရားကိုအံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုချစ်ကြသည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့မင်းရဲ့ရှိနေခြင်းကိုပျောက်လွင့်သွားစေခြင်းကြောင့်သင့်ကိုငါလွမ်းခဲ့တယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကမေ့မေ့လျော့လျော့မှတ်ဉာဏ်အပြည့်အဝကြောင်းပြောတယ်။
ငါ့အတွက်ငါအရေးအကြီးဆုံးသောအမျိုးအစားမှာကဗျာ၊ ထို့နောက်ဇာတ်လမ်းနှင့်အက်ဆေးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ဝတ္ထု။ ဒါကငါအများဆုံးပိုက်ဆံရရှိခဲ့တယျ။
သင့်ကိုလက်ညှိုးထိုးစရာမလိုဘဲသင်ခံစားမိအောင်တစ်စုံတစ် ဦး ကဒါကိုသဘောကျတယ်။
ချစ်လှစွာသောငါတို့အိမ်ထောင်ရေးသည်ပျက်ကွက်ခြင်းမဟုတ်၊ ပို၍ ဆိုးဝါးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီတစ်ခါလည်းဒါငါတို့ကိုဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကအသင့်လျော်ဆုံးစကားလုံးမဟုတ်စည်းလုံးညီညွတ်ရေး။ ငါဆိုလိုတာကငါတို့တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာအတွက်မဆိုင်းမတွမုန်းတီးမှုကိုဆိုလိုတာ။
ငါအမြဲစိတ်ဆိုးနေတယ် ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ လိုပဲငါနှင့်အတူမသက်မသာပေါ့လိုပဲ။
သူ၏နှုတ်ခမ်းများကလိုအပ်သော caress ခဲ့ကြသည်, သူသည်သူတို့ကိုမပါဘဲယခုတိုင်အောင်အဘယ်သို့နေထိုင်နိုင်မည်နည်း။
ငါသည်လည်း corny သောအရာကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌အနည်းငယ်မကျေနပ်မှုခံစားရတယ်, ငါ corny ရုံဖြစ်ပုံရသည်: ငါ့လက်၌ငါ့နှလုံးနှင့်အတူအစဉ်အမြဲလမ်းလျှောက်။
ငါအချိန်ကုန်လွန်သွားသောကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားမှုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်ဘာမျှမလုပ်၊ ဘာမျှဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိ၊ ငါ့ကိုဘာကြောင့်ငါ့ကိုအမြစ်တွယ်စေသနည်း။
လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးပါသောရှေ့နေတစ် ဦး သည်လက်နက်ကိုင်ယောက်ျားတစ်ထောင်ကျော်ကိုလုယက်နိုင်သည်။
အဆိုးမြင်သမားတစ် ဦး သည်ကောင်းစွာသိသောအကောင်းမြင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဘဝတွင်အပျော်ရွှင်ဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ - နေရောင်ခြည်ကိုအရွက်များမှတဆင့်ကြည့်ခြင်း။
အစဉ်မပြတ်ငါနားမလည်ကြပေမယ့်? ငါ့အမှားတွေနဲ့ငါ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေ။ အစားမင်းရဲ့လက်ထဲမှာကမ္ဘာကြီးဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လုံးဝ၊ လုံးဝ၊ လုံးလုံးလျားလျားချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ရန်သင်သည်လည်းသင်ချစ်မြတ်နိုးခံရကြောင်း၊ သင်ကိုလည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ကိုအပြည့်အ ၀ သတိပြုရန်လိုအပ်သည်။
ငါချစ်တယ်မင်းကိုချစ်တယ်သူချစ်တယ်၊ ငါတို့ချစ်တယ်၊ သင်ချစ်တယ်သူတို့ချစ်တယ် ငါ conjugation ပေမယ့်အဖြစ်မှန်မဟုတ်အလိုရှိ၏။
ဒီစာပိုဒ်တိုတွေကိုမင်းကြိုက်တယ်၊ ငါတို့လူသားရဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကြောင်း၊ နှစ်တွေတစ်လျှောက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာတွေကိုသိဖို့မင်းကိုအားပေးပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » Mario Benedetti ၏အကောင်းဆုံးစကားစု
မျှဝေဖို့ Sarcastic စာပိုဒ်တိုများ